SAFA: Asihlangene nokuxoshwa kukanompempe | isiZulu
Cape Town – Inhlangano yebhola kuleli, iSouth African Football Association (SAFA), ithi ukuvalwa ebholeni impilo yakhe yonke kukanompempe waseGhana, uJoseph Lamptey, owatholakala enecala ngokuba nesandla kumphumela weBafana Bafana, nalapho yahlula khona iSenegal ngo-2-1 ngoNovemba wangonyaka owedlule, “akuhlanganise lutho nabo”.
Kulo mdlalo, okwakuwumdlalo wokuhlungela iNdebe yoMhlaba ngoNovemba mhlaka-12, kunyaka ka-2016, iBafana yanikwa iphenathi ngomzuzu ka-43 ngesikhathi ibhola elalishaywe u-Eleazar Rodgers lishaya edolweni kumdlali weSenegal, uKalidou Koulibaly.
Kodwa-ke kwamangala abantu enkundleni ngesikhathi, uLamptey enquma ukunikeza iBafana iphenathi, wathi lishaye esandleni.
UThulani Hltashwayo wathi ubonwa yini, walivalela phakathi nokwenza iBafana yahamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni.
Okwamanje akukakacaci ukuthi iFIFA yazi kanjani ngezinhloso zikaLamptey zokupheka umphumela walo mdlalo, kodwa eminye imibiko isola ukuthi ukubheja okukhona ebholeni kungenzeka ukuthi kwaba nesandla kulokhu.
Esitatimendeni, iFIFA ithe izokhipha eminye imininingwane “uma isinqumo sekungesokugcina futhi sesibophezela”.
ISenegal Football Federation isiyishayele ihlombe iFIFA ngesinyathelo sayo, kodwa isalinde ukufinyelela emaphethelweni kophenyo ukuze kutholakale ukuthi zikhona yini ezinye izinyathelo ezizothathwa mayelana nalo mdlalo othintekayo.
Ukuwina kweBafana kulo mdlalo, okwaba ngumdlalo wokugcina kaShakes Mashaba njengomqeqeshi weqembu lesizwe, kwashiya iNingizimu Afrika isendaweni yesibili ku-Group D – ingaphezulu ngephuzu elilodwa kweSenegal.
Kodwa-ke iSAFA ithi yona ayikho into ezoyixoxa ngoba isidlulele phambili.
“Akuhlangene nathi. Saya laphaya, sadlala umdlalo sase sathola amaphuzu amathathu," okhulumela iSAFA, uDominic Chimhavi, utshele iSport24.
Uthi uma kungukuthi unompempe washaya eceleni lokho akuhlangene nabo, wathi nabo (iBafana) isike yaba yizisulu zezinqumo zonompempe ezishiya imibuzo.